मेयरले फेर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको मुहार- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १३, २०७९ कान्तिपुर फोटो विभाग
काठमाडौँ — संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित वालेन्द्र साहले सोमबारदेखि कार्यभार सम्हाल्दैछन् । वालेन्द्रले दलहरूको दबदबा चिर्दै छोटो समयमै काठमाडौंवासीको मन त जिते तर मेयरको रुपमा उनका अघिल्तिर चुनौतीका चाङ छन् । काठमाडौं सधैं धुवाँ, धुलो, फोहोर, जाम र थोरै वर्षा भए पनि बाढी आउने समस्याले प्रताडित छ ।
राजनीतिक दल र नेतालाई पटक-पटक भरोसा गरे पनि सुविधाको श्वास फेर्न नपाएका महानगरवासीले नयाँ मेयरबाट परिवर्तनको आशा राखेका छन् । उनले पाएको फराकिलो मतान्तरले उनीमाथि यहाँका मतदाताले राखेको आशा र भरोसा दुवै झल्किएको छ । दलको घेराभन्दा बाहिरबाट काठमाडौंमा पहिलो मेयरको रुपमा महानगर छिर्न लागेका उनले कस्तो काम गर्लान् ? अहिले धेरैको चासो यही छ । मनसुन सुरु हुँदैछ तर‚ सडकमा फोहोर यत्रतत्र छ । कतै खाल्डो, कतै हिलो । थोरै पानी पर्दा उर्लिएर आउने यहाँका खोलाले बर्सेनि बाढीको रुप लिन्छन्, र बर्सेनि लाखौँ धनजनको क्षति हुन्छ, ज्यानै पनि लिन्छ । काठमाडौंका सडक न पैदलयात्रुमैत्री छन्, न अपाङ्गमैत्री । सडकमा ट्राफिक जाम हुने समस्या निरन्तर छ । हिँड्दा-हिँड्दै फुटपाथ टुंगिन्छन् । बाटोमा रहेका बिजुलीको खम्बामा गुजुल्टिएर रहेका बिजुली तारले बाटो छेकेर सहरलाई झन् कुरुप बनाएका छन् । अब महानगरका मेयरले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने विषय के छन् त ? प्रस्तुत छ महानगरको अहिलेको अवस्था झल्काउने तस्बिर कथा :
तस्बिर कान्तिपुर अर्काइभबाट
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १९:२०
रञ्जन कोइराला बानेश्वरबाट पक्राउ
जेष्ठ १३, २०७९ मातृका दाहाल
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसला बदर गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइराला शुक्रबार पुनः पक्राउ परेका छन् । व्यक्ति हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएर पनि सर्वोच्चले दुई वर्षअघि कैदमा भारी छुट दिएपछि कोइराला छुटेका थिए ।
जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्ष कायम गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशद्वय टंक मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उल्ट्याएपछि कोइराला सम्पर्कविहीन भएका थिए । अदालतको फैसलालगत्तै फरार भएका उनलाई शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो ।
२०६८ पुसमा पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएपछि कोइराला डिल्लीबजार कारागारमा थिए । पत्नी गीताको हत्या गरी कोइरालाले मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर शव जलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तर, कसुर अस्वीकार गर्दै कोइरालाका तर्फबाट सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि फैसला गर्दै २०७७ असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्ष कायम गरेपछि उनी साउन ८ मा कारागारमुक्त भएका थिए । त्यसयताको दुई वर्ष कारागारबाहिर रहेका कोइराला सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलाले पुनः कारागार चलान हुने भएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले कोइरालालाई सोमबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराएर कारागारको जिम्मा लगाइने बताए । शनिबार र आइतबार बिदा परेका कारण अदालत बन्द हुने भएपछि सोमबार मात्रै कोइरालालाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलासँगै कोइरालाले साढे ११ वर्ष कारागार बस्नुपर्नेछ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि दुई वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । त्यतिन्जेल आठ वर्ष ६ महिना थुनामा बसेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो । तर, फैसला गैरकानुनी भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनपछि २०७७ साउन ११ मा सर्वोच्चले आफ्नै पहिलेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको थियो । बिहीबार गोला प्रक्रियाअनुसार तोकिएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले हाल निलम्बनमा रहेका जबरासहितको इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याइदिएपछि कोइरालाको जन्मकैद पहिलेकै कायम भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ मा उनलाई पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । काठमाडौंका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको इजलासले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालत गएका थिए । कोइराला एकवर्षे नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि २०६८ भदौमा चीन गएका थिए । चार महिनापछि २०६८ पुस २१ मा बिदामा नेपाल आएका उनले पुस २७ मा गीताको घर पुगी कान्छो छोरा लिएर निस्किएका थिए । त्यसको केही दिनमै गीता सम्पर्कविहीन भइन् । माइती पक्षले उनको खोजबिन गर्न प्रहरीमा निवेदन दिएपछि अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा कोइरालाले गीताको हत्या गरी टिस्टुङमा लगेर शव जलाएको खुलेको थियो ।
फैसला आउँदा नआउँदै रञ्जन फरार
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १८:४२